Mooshinkii yimide maxaa la gudboon Farmaajo? - Caasimada Online
Home Maqaalo Mooshinkii yimide maxaa la gudboon Farmaajo?
Mooshinkii yimide maxaa la gudboon Farmaajo?
“Mineey fatuuro fiiq tiraah ninkii fadhaaya ma fayaabo.”
– Shaki ma leh inaanu fadhi oolin haddii giraantii waxay soo wareegtaba ay ku timid kursigii madaxweynaha, oo caawa dooddu aysan ka taagnayn Baydhabo, Kismaayo, Garowe, Dh/mareeb ama Jawhar ee doodda Golaha Shacabka hortaal ay tahay xil ka qaadista madaxweynaha.
– Wadahadal iyo wadaxaajood xeerinaya danaha guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo uu madaxweynaha la yeesho xoogaga siyaasadeed ee ka biyo diidsan siyaasadiisa, indheer-garadka iyo xoogaga bulsho, ayaa lama huraan ah, si loo hakiyo baahitaanka khilaafka oo sida tagtada dhaw aan ka baranay albaabada u fura farogelin shisheeye oo aanay cidina ka macaashin.
– Madaxweyne Farmaajo horay ayaad danta guud u xeerisay oo aad uga tanaasushay xilkaagii sanadkii 2011, kumana aadan khaasarin oo si guud iyo si gaar ahba waad uga faa’iiday oo waa kaa aad maanta dalka hogaaminayso oo xilkii ugu sareeyay aad hayso.
– Dhamaan dhacdooyinkaa hal darsi ayaan ka baran karnaa oo ah “Soomaali walaaloow unbaa lagu wadi karaa” ee madaxweyne wadaxaajood ku dedaal.
Waxaa qoray Dr. Maxamed Axmed Sh Cali (Doodishe), oo ahaa lataliyaha arrimaha siyaasadda ee Madaxeynihii hore Xasan Sheekh, isagoo talooyin siinaya madaxweyne Farmaajo oo haatan uu mooshin ka yaallo